Vista's Colorful Planet: သီတင်းကျွတ်လပြည့် ( အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ )
ချစ်ဗစ်ရေ သေချာဖတ်ကာမှတ်သားသွားပါတယ် လုပ်လည်းလုပ်ကြည့်ပါမယ် ခုလိုဖတ်၇အောင်တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Same to you Rita !!
စားရဖို့ စောင့်နေတယ်နော် ဟက်ဟက်...
Happy Thadingyut ပါ ဗစ်ဗစ်ရေ....
မီးပုံးလှလှလေးတွေ ဆီမိးခွက်လေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာ မ၇ှိဘူးလား...
လိုက်နာသင့်တဲ့၊ ကျင့်ကြံသင့်တဲ့ ကောင်းသောတရားတွေကိုမျှဝေပေးလို့ လေးစားပါတယ်။
"ခေါက်ထားလိုက် ဆုံးမစကားတွေ နားထောင်ဖို့ရာ... ပျင်း
ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဒဿနနဲ့ ဘဝကို ဖြုန်းတီးပစ်ဖို့... ပျင်း
ငါ့မှာ ပျင်းရမှာလဲပျင်း... ငပျင်း"
အခုအချိန်မှာ အပေါ်က သီချင်းဆိုပြရင် ခေါင်ကို တင်းပုတ်နဲ့
ကလူထွေး အမှန်ကအဲဒါကျနော့်သီချင်းပါ ဟိဟိ
ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းက မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ ချစ်ဗစ်။
ဆုံးမစကားတွေကို ရေးပေးထားလို့ ကျေးဇူး
အဲဒီ့နေ့ က ဘုရားကန်တော့ဖြစ်တယ်
ကျန်တဲ့အချိန်ကစလို့ကိုယ်အတွက် အမြဲဝါဆို
ဘဏ်လေးကအမြဲဝါဆို ဆိုတော့အမြဲဥပုသ်စောင့်တယ်ထင်တယ် ဟိဟိ